PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - Gwema ingcindezi uma uzithwele
Gwema ingcindezi uma uzithwele
KUBALULEKILE ukuba omame abazithwele baxwaye izinto ezingabadalela ingcindezi (stress) ngoba lokho kungakhubaza umqondo womntwana abasuke bemthwele, akhule abe nomqondo othatha kancane.
Lokhu kushiwo ngudkt oyingcweti emkhakheni wezokucwaningwa kokusebenza kwengqondo, udkt Lihle Qulu oyi-neuroscientist, ngesikhathi enengxoxo ekhethekile NELANGA Langesonto ebelimcele ukuba acacise ngezifo zengqondo ezidalwa yingcindezi ezinganeni.
Le ngcweti kadokotela esencane ezalwa elamontville eningizimu yetheku ithi uma unina wengane ekhulelwe enengcindezi, kuphuma uketshezi oluya esibelethweni ikakhulukazi ngezinyanga zokubeletha, lungene kuyo (ingane) lone umqondo wayo.
“Ingcindezi esuka kunina iye kumntwana esibelethweni ifike yone ubuchopho bengane. Ucwaningo lwethu luveza ukuthi izingane ezibe nabazali ababe nengcindezi bekhulelwe zithi uma zihlangana nezifo zezingane, bese lezo zifo (zezingane) zibhebhetheka kakhulu.
"Lokhu kwenziwa yilo lolu ketshezi oluphuma ebuchosheni bomzali lungene kumdlezane, luqhubeke luye ebuchosheni bengane.
"Lokhu kungaphinde kukhubaze ingane uma ngabe isifunda. Futhi lokhu kungenza ingane ikhule inokukhubazeka,” kubeka yena.
Udkt Qulu uqhubeke wathi bayanxuswa onina bezingane abasuke bekhulelwe ukuba bazexwaye izinto ezizobakhathaza imiphefu- mulo noma zibahlukumeze ngandlela thile.
“Abazame ukuziqhelanisa nezinto ezizobabangela ingcindezi ukuze kuphephe izingane abasuke bezithwele ezingenacala. Kubuhlungu ukubona ingane isidonsa kanzima esikoleni ngenxa yomphumela wokuhlukumezeka kukanina. Kanjalo nabesilisa abavamise ukuhlukumeza abesifazane kuhle bawazi umphumela wezenzo zabo,” kulanda udkt Qulu.
Nakuba kungekuhle ukuphathwa yingcindezi kodwa kubikwa ukuthi kuyinto ejwayelekile nakubantu besifazane abazithwele.
Kuthiwa isizathu salokho sisobala - wukuthi umuntu usuke ekhulisa umphefumulo kuye ngaphakathi, lokho okungeyona into encane.
Ngokolwazi olucashunwe kwiBaby Centre, kuyimvelo ukuba owesifazane ozithwele abe nokukhathazeka ngokuthi ngabe ingane yakhe ikhula kahle esiswini, ukuzalwa kwayo kuzoyishintsha kanjani impilo yakhe, nobudlelwano akubo bothando, kanti abanye kuyenzeka bakhathazeke ngokuthi ngabe bakulungele ngempela yini ukuba wumzali.
Enye yezinto abathi ziyasiza uma uzizwa unokukhathazeka okuthile wukuba ukhulume nothile noma nophathina wakho ngokukhathazeka onakho. Lokhu kubikwa ukuthi kuyakwehlisa kancane ukukhathazeka, ngoba ngesinye isikhathi uthola neziyalo ezingakusiza. Ukukhuluma nabanye omama nakho kubikwa ukuthi kungasiza kakhulu njengoba ezinye izinto eziphathelene nokuzithwala besuke bezazi, sebeke badlula kuzona. Uma into ekukhathazayo kuyinto obona sengathi inzima kakhulu kuthiwa ungaxhumana nogcweti kwezokululeka.
Ngokwalesi sikhungo (Baby Centre), ozithwele angehlisa ingcindezi ngokuba:
1. Anciphise ukusebenza kakhulu, azinike isikhathi sokuhlala phansi aphumule.
2. Azinike isikhathi sokuzivocavoca, alule umzimba.
3. Enze isiqiniseko sokuthi udla okunempilo.
4. Azame ukusheshe alale. 5. Angalaleli kakhulu izinto ezingezinhle mayelana nokuzithwala ezikhulunywa ngabanye besifazane.
ISITHOMBE: HOUSTON DEFENDER
INGCINDEZI yomzali ozithwele ingaphazamisa ukukhula komntwana.